IFord Motor Inkampani iwonga iBorgWarner ngeMbasa yeHlabathi yokuGqwesa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IFord Motor Inkampani iwonga iBorgWarner ngeMbasa yeHlabathi yokuGqwesa
I-BorgWarner, inkokeli yemveliso kwihlabathi liphela ehambisa izisombululo zokuhambisa ezizinzileyo nezizinzileyo kwimakethi yezithuthi, iye yamkelwa njengomnikezeli oqhuba kakuhle kwihlabathi kwi-23 yonyaka yeFord World Excellence Awards. I-BorgWarner ibhengezwe njengoMenzi weeMveliso eziFunekayo ekufuneka ziphumelele namhlanje kumsitho weFord Motor Inkampani.
I-BorgWarner, inkokeli yemveliso kwihlabathi liphela ehambisa izisombululo ezintsha nezizinzileyo zokuhamba kwimakethi yezithuthi, iye yamkelwa njengomthengisi oqhuba kakuhle kwihlabathi kwi-23.rd Amabhaso eFord World Excellence Awards rhoqo ngonyaka. I-BorgWarner ibhengezwe njengoMenzi weeMveliso eziFunekayo ekufuneka ziphumelele namhlanje kumsitho weFord Motor Inkampani.
UFrédéric Lissalde, umongameli kunye neCEO, uBorgWarner Inc. ibeka ekuqinisekiseni ukuba iitekhnoloji zethu ezicocekileyo nezisebenzayo zezona zikumgangatho ophezulu kwaye ziyahlangabezana neemfuno zokuhamba kwexesha langoku nelizayo.
“IiMbasa zeFord Motor zeNkampani eziGqwesileyo zeHlabathi zibaqaphele abathengisi bethu abasebenza ngokugqwesileyo kwihlabathi liphela ngokunceda ukuzisa isicwangciso seFord + ebomini, utshilo uHau Thai-Tang, iqonga lemveliso eliyintloko kunye negosa lokusebenza. "Ababoneleli abanjengoBorgWarner bangundoqo kwimpumelelo yeFord njengoko sisebenzisa amandla esiseko sokwakha amandla amatsha kunye nokuchumisa amava abathengi."
Abahloniphekileyo bayaqatshelwa ngokufumana amanqanaba aphezulu okugqwesa kwihlabathi kwiindidi ezibandakanya:
Amabhaso eentsika zentsika yaseprayimari-Nyanga abaThengi njengoSapho, Jika ujikeleze ukuSebenza kweZithuthi kwaye ukhuphisane njengoMceli mngeni, Yenza iiMveliso eziFunekayo
Ukwahluka kunye nokufakwa kwamabhaso kubaboneleli abagqwesileyo ekuhlanganiseni iyantlukwano kwimibutho nakwinkqubo yeshishini
Ukuzinza kwamabhaso kubaboneleli abaphucula imeko yeshishini
Igolide kunye neSilivere amabhaso oMgangatho weendawo zokuvelisa ababonisi ezibonisa umgangatho ophezulu, ukuhanjiswa kunye nokusebenza kweendleko unyaka wonke